Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany
Rehefa naniry ny hanangana zaza ao amin'ny fiarahamonina tranainy ny lehilahy iray dia nilaza ireto teny manaraka ireto tamin'ny lanonana tsotra: «Izaho ho rain'ny azy ary ho tonga zanako lahy izy. »Nandritry ny lanonana fampakaram-bady dia nisy fehezan-teny mitovy amin'izany:« Vadiko izy ary vadiko ». Eo anatrehan'ny vavolombelona dia notaterina ny fifandraisan'izy ireo ary tamin'ny alàlan'ireo teny ireo dia nambara tamin'ny fomba ofisialy fa manan-kery.
Toy ny ao amin'ny fianakaviana iray
Rehefa naniry haneho ny fifandraisany tamin’ny Isiraely fahiny Andriamanitra, dia nampiasa teny mitovy amin’izany izy indraindray: “Izaho no rain’ny Isiraely, ary Efraima no lahimatoako.” ( Jeremia 3 ).1,9). Noho izany dia nampiasa teny mamaritra ny fifandraisana - toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mampiasa ny fanambadiana koa Andriamanitra mba hamaritana ny fifandraisana: “Izay nanao anao no vadinao ... niantso anao ho any aminy tahaka ny vehivavy Izy” (Isaia 5.4,5-6). “Tiako ho fofombadiko mandrakizay” (Hosea 2,21).
Matetika kokoa ny fifandraisana dia voarafitra toy izao manaraka izao: “Ianareo ho oloko, ary Izaho kosa mba ho Andriamanitrareo”. Teo amin’ny Israely fahiny, ny teny hoe “olona” dia midika fifandraisana mafy orina amin’ny tsirairay. Hoy i Rota tamin’i Naomy: “Ny firenenao no oloko.” (Rota 1,16), nampanantena izy fa hiditra amin'ny fifandraisana vaovao sy maharitra. Nohazavainy hoe aiza no hipetrahany ankehitriny. Fanamafisana amin’ny fotoan’ny fisalasalana Rehefa miteny Andriamanitra hoe: “Oloko ianareo”, izy (toa an’i Rota) dia manantitrantitra kokoa ny fifandraisana fa tsy ny fananana. "Mifatotra aminao aho, toy ny fianakaviana amiko ianao". Milaza izany matetika kokoa Andriamanitra ao amin’ny bokin’ny mpaminany raha oharina amin’ireo soratra masina teo aloha rehetra natambatra.
Fa maninona no averimberina matetika izany? Noho ny tsy fahatokisan'ny Isiraely azy no nahatonga ny fifandraisana tsy hisalasala. Tsy niraharaha ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra ny Isiraely ary nanompo andriamani-kafa. Noho izany, dia navelan'Andriamanitra hanjaka ny foko avaratra mba hoentin'i Asyria sy hoentina ny olona. Ny ankamaroan'ny mpaminanin'ny Testamenta Taloha dia niaina kelikely talohan'ny fandresen'ny firenena ny firenen'i Joda sy ny nandehanan'ireo Babylonianina.
Nanontany tena ny olona. Tapitra ve ny zava-drehetra? Nanda antsika ve Andriamanitra? Namerimberina tamim-pahatokiana ireo mpaminany hoe: Tsia, tsy nanary antsika Andriamanitra. Isika mbola olony ary mbola Andriamanitsika ihany. Naminany mialoha ny famerenam-pirenena ny mpaminany: hiverina any amin'ny fireneny ny olona ary, ny tena zava-dehibe dia hiverina any amin'Andriamanitra. Ampiasaina matetika ny endrika ho avy: "Ho oloko ianao ary Izaho ho Andriamanitrao". Andriamanitra tsy nandà azy; haveriny ny fifandraisana. Hataony izany ary ho tsara kokoa noho ny teo aloha izy.
Ny hafatr'i Isaia mpaminany
“Nitaiza sy nitaiza zaza aho, ary tamin’ny alalany no nanaovany zavatra, nefa niala tamiko izy”, hoy Andriamanitra tamin’ny alalan’i Isaia. “Nivily niala tamin’i Jehovah izy, nandà ny Iray Masin’ny Isiraely ka nandà Azy” (Isaia 1,2 u. 4; Fiainam-baovao). Vokany, gadraina ny olona. “Izany no mahatonga ny oloko hiala, fa tsy manan-tsaina izy” (Isaia 5,13; Fiainam-baovao).
Toa efa tapitra ny fiarahana. “Efa noroahinao ny olonao, dia ny taranak’i Jakoba”, hoy ny vakintsika ao amin’ny Isaia 2,6. Tsy tokony ho marina mandrakizay anefa izany: “Aza matahotra, ry oloko izay monina ao Ziona... Fa vetivety foana dia hifarana ny tsy rariny ataoko” (10,24-25). “Tsy hanadino anao aho ry Israely!” (faha-44,21). “Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin’ny ory” (49,13).
Niresaka momba ny fampodiana an-tanindrazana ny mpaminany: “Fa Jehovah hamindra fo amin’i Jakoba ka hifidy ny Isiraely indray ka hametraka azy ao amin’ny taniny.” (Gen.4,1). « Te-hilaza amin'ny avaratra aho: omeo ahy, ary amin'ny atsimo: aza mihemotra! Ento atỳ ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin’ny faran’ny tany.” (43,6). “Ny oloko dia hitoetra ao amin’ny ahitra mandry fahizay, ao amin’ny fonenana mandry fahizay ary ao amin’ny fiadanam-po mahatoky” (32,18). “Ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin’ny tava rehetra ... Amin’izany andro izany dia holazaina hoe: Indro, Andriamanitsika, Izay nantenainay hamonjy antsika” (Eks.5,8-9). Ary hoy Andriamanitra taminy: “Hianareo no oloko” (Deot1,16). “Hianareo no oloko, dia zanaka tsy mba mandainga” (63,8).
Misy vaovao mahafaly, tsy ho an’ny Isiraely ihany, fa ho an’ny rehetra koa: “Ny hafa firenena hikambana aminy ka hifikitra amin’ny taranak’i Jakoba.” (Gen.4,1). “Ny vahiny izay miverina amin’i Jehovah aoka tsy hanao hoe: Jehovah hiaro ahy tsy ho eo amin’ny olony” (Deo.6,3). “Jehovah, Tompon’ny maro, dia hanao sakafo matavy ho an’ny firenena rehetra eto amin’ity tendrombohitra ity” (Eks5,6). Hoy izy ireo: “Ity no Jehovah ... aoka isika hifaly sy hifaly amin’ny famonjeny” (Eks.5,9).
Ny hafatr'i Jeremia mpaminany
I Jeremia dia nanambatra ny sarin'ny fianakaviana: "Nieritreritra aho hoe: Ahoana no hihazonako anao ho toy ny zanako, ka homeko anao ny tany malalako ... Nihevitra aho fa hiantso ahy hoe" Ray malala "ka tsy handao Ahy. Fa ny taranak'Isiraely kosa tsy nahatoky Ahy, tahaka ny tsy mahatoky ny vehivavy amin'ny sakaizany, hoy Jehovah. 3,19-20). “Tsy nitandrina ny fanekeko izy, na dia tonga tompony aza Aho” (31,32). Tany am-piandohana, dia naminany i Jeremia fa hifarana ny fifandraisana: “Tsy an’i Jehovah ianareo! Manamavo Ahy ny taranak’Isiraely sy ny taranak’i Joda, hoy Jehovah.”5,10-11). “Efa nanasazy an’i Israely Aho noho ny fijangajangany, ka nafahako azy, ary nomeko taratasy fisaoram-bady izy.”3,8). Tsy fandavana maharitra anefa izany. “Tsy zanako sy zanako malalako va Efraima? Satria isaky ny mandrahona azy aho dia tsy maintsy mahatsiaro azy; izany no torotoro ny foko hamindra fo aminy, hoy Jehovah » (31,20). "Mandra-pahoviana ianao no te hivily, ry zanakavavy mpivadika?" (31,22). Nampanantena izy fa hamerina azy ireo toy izao: “Hangoniko izay sisa amin’ny ondriko avy any amin’ny tany rehetra izay nandroahako azy.” ( Eks.3,3). “Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hampodiako ny anjaran’ny Isiraely sy ny Joda oloko, hoy Jehovah” (30,3:3). “Indro, hitondra azy avy any amin’ny tany avaratra Aho, ary hangoniko avy any amin’ny faran’ny tany izy.” (1,8). “Hamela ny helony Aho ka tsy hotsarovako mandrakizay ny fahotany” (31,34). “Tsy ho mpitondratena ny Isiraely sy ny Joda, nafoin’Andriamaniny, Tompon’ny maro” (Deo.1,5). Tena zava-dehibe tokoa ny hanovan’Andriamanitra azy ireo mba ho mahatoky: “Miverena, ry zaza mpivadi-pinoana, fa hositraniko ho afaka amin’ny tsi-fanarahanareo ianareo.”3,22). “Ary tiako homena fo izy hahalalany Ahy fa Izaho no Jehovah” (Eks4,7).
“Tiako hatao ao am-pony ny lalàko sy hanoratra ao an-tsainy” (31,33). “Mitovy hevitra sy fitondran-tena mitovy no tiako homena azy ireo ... ary tiako hatao ao am-pony ny fahatahorana Ahy, mba tsy handaozany Ahy” (32,39-40). Mampanantena ny fanavaozana ny fifandraisan’izy ireo Andriamanitra, izay mitovy amin’ny fanaovana fanekena vaovao amin’izy ireo: “Izy no tokony ho oloko, ary Izaho kosa te ho Andriamaniny” (2).4,7; 30,22; 31,33; 32,38). “Izaho dia te ho Andriamanitry ny fianakaviana rehetra amin’ny Isiraely, ary izy ireo ho oloko” (31,1). “Te hanao fanekena vaovao amin’ny taranak’Isiraely sy amin’ny taranak’i Joda Aho” (31,31). “Tiako ny hanao fanekempihavanana mandrakizay aminy, izay tsy hitsahatra hanao soa aminy” (32,40).
Hitan’i Jeremia fa ho anisan’izy ireo koa ny Jentilisa: “Hamelezana ny ratsy fanahy rehetra mifanakaiky amiko, izay mikasika ny lova nomeko ny Isiraely oloko: Indro, hongotako amin’ny taniny izy, ary ny taranak’i Joda hofongorana tsy ho eo aminy. ... Ary rehefa mianatra amin’ny oloko ny hianiana amin’ny anarako hoe: Raha velona koa Jehovah! ... ka dia honina eo amin’ny oloko izy” (12,14- iray).
Manana hafatra mitovy amin'izany i Ezekiela mpaminany
I Ezekiela mpaminany koa dia milazalaza ny fifandraisan’Andriamanitra amin’ny Isiraely ho toy ny fanambadiana: «Ary nandalo Aho ka nijery anao, ka, indro, izao no andro hifohazana aminao. Dia navelako teo amboninao ny lambako ary nosaronako ny fitanjahanao. Ary nianiana taminareo Aho ka nanao fanekena taminareo, hoy Jehovah Tompo, mba ho Ahy ianareo » (Ezekiela 1.6,8). Ao amin’ny fanoharana hafa, Andriamanitra dia milaza ny tenany ho mpiandry ondry: “Tahaka ny mpiandry ondry mitady ny ondriny izay very amin’ny ondriny, dia toy izany koa no hitady ny ondriko sy hanafaka azy amin’ny tany rehetra izay nielezany.” (34,12-13). Araka io fanoharana io, dia ovainy ny teny momba ny fifandraisana: “Hianareo ho ondriko sy ondry fiandriko, ary Izaho ho Andriamanitrareo” (3).4,31). Naminany izy fa hiverina avy any an-tsesitany ny olona ary hanova ny fony Andriamanitra: «Hanomezako fo hafa izy ireo ka homeko fanahy vaovao, ary hesoriko amin’ny vatany ny fo vato, ka homeko fo nofo izy ireo. izany no andehanany araka ny didiko sy hitandrina ny didiko ary hanaraka izany. Ary izy ireo dia tokony ho oloko ary Izaho te ho Andriamaniny »(11,19-20). Ny fifandraisana koa dia nofaritana ho toy ny fanekem-pihavanana: “Tiako ny hahatsiaro ny fanekeko izay nataoko taminareo fony ianareo mbola tanora, ary tiako ny hanorina fanekena mandrakizay aminareo” (Gen.6,60). Honina eo anivon’izy ireo koa Izy: “Honina eo aminy Aho, ka ho Andriamaniny, ary izy ho oloko.” (37,27). «Ary honina eto mandrakizay eo amin’ny Zanak’Isiraely Aho. Ary tsy handoto ny anarako masina intsony ny taranak’Isiraely” (43,7).
Ny hafatry ny mpaminany kely
Hoy koa i Hosea mpaminany: “Tsy oloko ianareo, ka tsy te ho anareo koa Aho.” ( Hosea 1,9). Raha tokony ho ny teny mahazatra momba ny fanambadiana, dia mampiasa ny teny hoe fisaraham-panambadiana izy: "Tsy vadiko izy ary izaho tsy vadiny!" (2,4). Toy ny efa nitranga tamin’i Isaia sy Jeremia anefa, dia manitatra izany. Nanampy haingana i Hosea fa tsy mbola tapitra ny fifandraisana: «Dia hantsoinao Aho, hoy Jehovah,» Vadiko «... Te-hifody aminao mandrakizay aho» (2,18 ny u. 21). « Te-hiantra an’i Lo-Rohama [ilay tsy tiana] Aho, ka hilaza amin’i Lo-Amy [fa tsy oloko] aho hoe: Oloko ianao, ary izy hanao hoe: Andriamanitro Hianao.2,25). « Toy izany no hanasitranako ny fivadiham-pinoana indray; Tiako ny ho tia azy; fa efa niala taminy ny fahatezerako » (14,5).
Mahita teny mitovitovy amin’izany koa i Joela mpaminany: “Ary Jehovah dia saro-piaro ny taniny ka hiantra ny olony” (Joela). 2,18). "Tsy ho menatra intsony ny oloko" (2,26). Nanoratra toy izao koa i Amosa mpaminany: “Hampody ny Isiraely oloko avy amin’ny fahababoany Aho.” ( Am 9,14).
“Hamindra fo amintsika indray Izy”, hoy i Mika mpaminany. "Ho mahatoky amin'i Jakoba ianao ka hamindra fo amin'i Abrahama, araka izay nianiananao tamin'ny razanay fahiny" (Mi. 7,19-20). Manome famintinana tsara toy izao ny mpaminany Zakaria: “Mifalia sy miravoravoa, ry Ziona zanakavavy; Fa, indro, avy honina eo aminareo Aho, hoy Jehovah » (Zakaria 2,14). “Indro, hanavotra ny oloko hiala amin’ny tany Aho mandra-piposahan’ny masoandro sy hiala amin’ny tany amin’ny filentehan’ny masoandro, ka ho entiko mody honina any Jerosalema. Ary izy ho oloko, ary Izaho kosa ho Andriamaniny amin’ny fahamarinana sy ny fahamarinana.”8,7- iray).
Ao amin’ny bokin’i Malakia farany ao amin’ny Testamenta Taloha dia manoratra toy izao ny mpaminany Malakia: “Izy ireo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, no ho fananako amin’ny andro izay hataoko, ary hamindra fo aminy Aho tahaka ny olona antra ny zanany manompo ve izy » (Mal 3,17).